DAAWO VIDEO:Soomaliland Oo Sheegtay In Itoobiya Hub Siisay Suldan Wabar,Itoobiya Oo Dekada Berbera Xoog Kula Wareegtey.. | Marqaan News Agency
DAAWO VIDEO:Soomaliland Oo Sheegtay In Itoobiya Hub Siisay Suldan Wabar,Itoobiya Oo Dekada Berbera Xoog Kula Wareegtey..
Published on January 11, 2017 by mar · 13 Comments
Maamulka Soomaliland Ayaa Si dabac san Uga Hadlay Inuu suldaan wabar Dhawaan Xadka Itoobiya Kasoo galay gobolada Maamulkaasi Uu ka Jiro waxayna Sheegeen inay ka Xun yahiin itoobiya xadkeeda laga Soo Galo.
Dhanka Kale waxa Maamulka Somaliland ka Hadlay Inay Imaraadka Iyo Itoobiya Labada Soomaliland ka Doonayaan Saldhigyo militeri oo looga Bahan Yahay gar ahaana Itoobiya OO Dekada Berbera Doonaysa .
wasiirka Arimaha debada sacad cali shire Ayaa Sjheegay Inay Arintaasi Jirto waxa Uu wal walkeeda Ka Muujiyey Itoobiya Inay Samayn toonto maamulkaasi.
Waxan maqli jiray nin iidoora maku dan kaa leeyahay wuxuu leyahay labiyo toban siil marka adigu dan ka leedahayna labiyo toban gus bal siduu ninkii sacad lalahaa markay ku foorarto uu isku dulaysiinayo daya xabashi hada berbera uma socoto ayagaa iaku qancinayee reysulwasaaraha xabashidu waxu saxiixay inuu dhowrayo mafax banaanida iyo xuduudaha dalka somaliya ee haday xabashiyu isaq walaalkod tahay haday wabar soo hubeyeene ha ka tosen hurdada horaa loo yiri god qiyaano ha qodin hada qodana ha dheereyn ku dhici doontaana lama ogo
Cisman, Dablariday, Somalilander and Hibo iga gudooma salaan.
Dekadda Berbera Ruush ayaa soo hunguriyeeyey, oo ku balan qaaday hadii la siiyo saldhig in uu Somaliland aqoonsan doono dhaqaalana siin doono. Dabadeed waxa ogaaday arintaa reer galbeed, waxaanay damiin ka dhigteen Emaraatka oo ay yidhaahdeen idinku meesh gala on our behalf si aad u hor joogsataan arinta Ruushka. Anagu dhaqaalahayag , ictiraafkayaga wixii kordhinaya waan soo dhawaynaynaa balse ruush ma rabno.
Runtu waa sidaa ay barwaaqo sheegtay oo dekeda berbera ruush iyo reer galbeed baa isku haysta oo xataa lacagtan DPWORLD waxay ka socotaa maraykanka si xooga loo saaro inaanu ruushku soo dhowaanin
Salaan gaar ah dhab dheh !!!
dowlada soomaaliya waa curtum aan weli cagaheeda si wanaaga aan u istaagin cadawya badan badan soo martey mar hadaan ka nimidney taay tan aan heysana soo maah horumar ey ku taaktaak saneysa dowlada oo weli curduna oo weli laga aqoosadey caalamka soomaaliya wey dhaqaadey waana in loo hanbalyeeyo cawadoow adiguse waxaad weli dib u raaceysa waxaan ka soo tagney saban cerceerki takto daaye timaadoo khabso hadeynu nahay soomaali waa in eynu ku faraxnaa dowlada curdumkaa ee xiratey maanta
Walaal dawladi ma curan ee ha hodmin. Soomaalida Soomaaliya Eebbe ayaa quluubtooda is waafajiyay oo sidaas ayay nabad iyo xasilooni ugu wada noolyihiin. Waa ummad ay colaadaha iyo dhibaatooyinku soo daashadeen oo runtii baa taabatay. Sidaas aawadeed anigu uma arko in ay qawsaaradan madax ku sheegta ah ee Xamar xaaraanta ku qasanaysa dalkani kheyr u hayaan shar mooyaan ee. hibooy musuq maasuq baahsan iyo xaaraan oo dhan baa Xamar la isku gacan dhaafsanayaa oo ma aha dad si xalaal ah lagu soo xushay. Calooshooda ayay u roorayaan ee waxba soo kordhin maayaan hibooy. Ilaahay aynu isu dhiibno oo dalkeenna la kaashanno inta jiil xalaal ahi xukunka qabsan doono.
Idoorku gaalo jacayl miyaa xabashi u geeyay waxaan xusuustay wedka oon ka dilin gaalka waa weheshanaayaan
Anigu ololihii aan Hartiga Somaliland qaddiyadda ku mideyn lahaa waan wadaa waxaa ay se u baahan tahay in barbaarta Somaliland ay isku gacan saartaan aayaha geyigoodani oo qawleysatadan wada hadhaagii ah ee aanay waxba deeqahayn meesha laga safeeyo. Berbera waa dekad straatiji ah ee aan qiimaheeda la koobi karin. In sidan jaban loo xaraasho waa dembi qaran oo aad looga dhiidhiyo. Ma ahayn in UAE xero meleteri ahaan looga kireeyo ee waxaa waajibku ahaa in shacabka reer Somaliland ay hanti qaran ahaan dekadda uga kireeyaan Shiinaha mise shirkadaha UAE iyo Malaysia inta casriyeeyaan ganacsiga caalamiga ku xidhi lahaa. Dhaqaale xooggan oo reer Somaliland baahiyadooda wax looga qabto ayaa ka soo xaroon lahayd. Dhallaankii dhaxli lahaa degalkan ha u soo gurmadeen inta weli fursadi jirto.
hanbalyo malaha miyaa dowladi corataye walaaloow
waxaa ka jira warkaas salaan sare barwaaqo cadey wadaana aragtaan maanta sidey wax waliba isugu Ken dhaceen miyaadan inoo hanbalyeeneyni Barwaaqo cadey dowladi corataye abaayo cadey Barwaaqo
Somaliland waa geyi ka mid ah labada geyi ee dalka Soomaaliya oogu baaxadda weyn ee uguna straatijisan. Masiibooyinka haystaa waxaa ugu weyn in ay xukunkii ku mintideen odayaal wada ah hadhaagii dawladdii kacaanka oo iimaankii inta laga qaaday geyigii dhammaa wada xaraashay. Somaliland dadkii lahaa gacan oogu ma jirto ee waxaa laga dhigtay saylad kheyraadka geyigan lagu xaraasho barri iyo baxar ba. Geyigani waa in si degdeg ah ay ugu soo gurmadaan oo una dhacsadaan barbaarta aqoonta leh, aqoonyahannada iyo wax garadka dhammaan beelaha geyigan ku abtirsada. Badbaado qaran ayay Somaliland u baahan tahay in goori goor tahay.
Cajiib… SOMALIA IYO SOMALILAND BA HADII xabashi iyo imaaraadku siday doonaan ka yeelan waa cajiib walee.
Xaaji Marqaan News, warku sidu yahay uun sheegaa idinkoon wax ku darin waxna ka dhimin , ana damaanad qaadayaa oo waxba idiinka soo gaadhi maayaan !! Wasiirku marnaba masoo qaadin in dawlada Ethiopia saldhig ka samaysanayso Berbera iyo inay suldaan wabbar siisay hub, Laakiin waxa uu ka hadlay saldhiga Military ee dawlada Emirates ka samaysanayso berbera !!